Mkpụrụ Semalt Na-akọ Ihe Njehie Ị Kwesịrị Ịhapụ Na SMM
Ndị ahịa na 2017 na-atụ anya ka ụlọ ọrụ achụmnta ego nọgide na-ekwurịta okwu mgbe niilesite na netwọk mmekọrịta. Otú ọ dị, ọtụtụ ụlọ ọrụ e-azụmahịa na-eleghara ịdị irè nke mgbasa ozi mgbasa ozi na Search EngineOptimization (SEO) na-adọta ma na-ejide ndị ahịa.
Jack Miller, onye njikwa nke ndị ahịa nke Ọkachamara ,na-egosi ihe atọ kachasị njọ nke òtù dị iche iche na-eme mgbe ha na-eduzi mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi.
1 - alojamiento web php. Ibute Mgbasa Ozi Na-enweghị Atụmatụ Dị Mma
Ọ dị mkpa ịmepụta ihe mgbaru ọsọ mgbasa ozi ọha na eze iji melite usoro ahịa ịntanetị.Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike inwe ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ. Otu ihe mgbaru ọsọ nwere ike ịbụ iji melite mgbasa ozi na ndị ahịa. Ihe mgbaru ọsọ ọzọ nke mmadụahịa mgbasa ozi nwere ike ịbụ iji netwọk mmekọrịta iji nye ọrụ nkwado ndị ahịa. Ezi usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-ejikọta ọtụtụ ihe mgbaru ọsọwelie mmekọrịta nke azụmahịa na ndị ahịa echere. Usoro dị irè nwere ezigbo ntanetị mmekọrịta netwọk.
A na-agba ume maka azụmahịa ndị na-eji ejiji ma ọ bụ ụdị ndụ ndụ na ọrụjiri Pinterest ma ọ bụ netwọk mmekọrịta netwọk Instagram. Pinterest nwere ọrụ e-azụmahịa nke na-enye ndị ahịa aka ịzụta ngwaahịa ma ọ bụọrụ online. Ndị na-ere ahịa na-enye ngwaahịa ọrụ na ọrụ-eme-onwe gị kwesịrị iji nchịkọta YouTube na Facebook n'ihi nkeike ha na-ekerịta egwu video. Ọ dị mkpa maka azụmahịa iji kwalite saịtị netwọk mmekọrịta ya.
Ịkọ usoro mgbasa ozi na ozi ịntanetị bụkwa ụzọ dị irè isi kwalite mgbasa ozi ọha na ezesaịtị ndị ahịa ahụ a chọrọ. Ụzọ ọzọ ezi nkwado SEO na-ebute ịnye mgbasa ozi mgbasa ozi na-ejikọta weebụsaịtị.
2. Ịghara Ịṅa ntị na Ịzaghachi
Ndị ahịa na-ekwukarị banyere ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa na-enyeòtù. Ọ dị mkpa na nlekọta nke ụlọ ọrụ ahụ na-ege ntị. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ nwere ike iji mee ka gị na ya kwurịta okwuonye ahịa, dịka ọmụmaatụ, mkpokọta mmekọrịta na Hootsuite. Otú ọ dị, ha anaghị enwe ike. Ya mere, azụmahịa ahụ kwesịrị imeghachi omumeọ bụla posts ndị ọrụ.
Facebook bụ ihe ntanetị mgbasa ozi nke na-eme ka azụmahịa nwee ike imeghachi omume n'ụzọ dị irèozi nke ndị ahịa. Ndị ọrụ na-enweta ọtụtụ nsogbu mgbe ha na-eweta ọrụ na ngwaahịa. Netwọk mmekọrịta na-akwadoụlọ ọrụ na-agwa ndị ahịa banyere nsogbu ma ọ bụ ihe ịma aka na usoro azụmahịa.
3. Ịkwụsị site na Nlereanya
Ọ dị mkpa ịnwale na arụmọrụ nke netwọk mmekọrịta. Ahịanwere ike iji ụzọ dị iche iche na-esonyere ndị ahịa. Vidio vidio bụ ihe dị na Facebook na Instagram. Ọ na-eme ezigbo ogenkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa. Ụlọ ọrụ nwere ike ịgwa ndị na-ege ntị banyere ihe ọhụrụ site na vidiyo vidioatụmatụ.
Ulo oru nwere ike iji obara ndu maka mgbasa ozi nkwalite ngwaahịa Microsoft. Na-egwu ndụna-adọta a nnukwu na-ege ntị n'ihi na ọ bụ mmekọrịta na utilizes ekwesị SEO Keywords. A na-enye ndị ọrụ mgbasaozi mgbasa ozi ohere ịjụajụjụ na ịchọta nkọwa. Oge na-agba ndụ na-eme ka azụmahịa ahụ nwee ike ịmụta n'aka ndị ahịa, karịsịa na mpaghara ahụnke imeju afọ ojuju ndị ahịa.
Ịmepụta SEO n'ime omume gị nwere ike imeziwanye mgbalị mgbasa ozi mgbasa ozi. SEO ọkachamaranwere ike iji okwu dị irè na mgbasa ozi mgbasaozi ha. Ndị ahịa ga-adọrọ mmasị na ọkwa na nwere ozi dị mkpa gbasaraarụ ọrụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.